AMAD ALY : Nopotsiriny teo imason’ ny mpanao gazety ny olana mahazo ny baolina kitra Malagasy
Nivoitra izany nandritra ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety, ny andron’ny alatsinainy 22 Martsa lasa teo iny, tao amin’ny « restaurant L’univers ».
Nopotsiriny imaso teto ny olana mahazo ny baolina kitra Malagasy, indrindra ny aty Atsinanana. Nambarany fa « misy ihany ny tsy fietezana amin’ny fomba itondrana ny tanora, tsy mipetraka amin’ny tokony ho izy ny fitsipika, hany ka mampivahavaha ny tanora ». Ankoatr’izany : tsy ampy, hoy izy, ny famporisihana atao amin’ny mpilalao, eny fa dia amin’ny klioba aza. Ambonin’izany, mandeha irery hatrany ny seksiona, ny ligy, mazava ho azy ny klioba. Tsy mba misy, hoy izy « ny tambin-karama famporisihana ny olona ».
Marihina, hoy izy, fa « miainga avy amin’ny foibe ny tsy fietezana izao, ka mila fi-tsaboina haingana ». Ny vahaolana : « tokony havaozina avokoa ny olona mpitantana rehetra, miainga avy amin’ny federasiona, ny ligy ary mipaka amin’ny seksiona ». Soso-kevitra no nomeny : « tokony mba hasiana fijerena manokana ireo klioba mandray anjara amin’ny fifaninanana, raha tsy hiteny afa-tsy ny fanomezana azy ire-ny ny ampaham-bola amin’ny vidim-pidirana ». Ny tena tsy tantiko, hoy izy « na rano sotroina amin’ny fialan-tsasatra aza no tsy azo amin’ireo mpi-karakara fifaninanana ». Mila tsaboina ireo rehetra ireo, fa marary ny baolina kitra, hoy ny teniny.
Koa satria ny tontolon’ny baolina kitra no nameno ny fiainany iray manotolo, dia mahatsapa ny lehilahy, fa tsy fotoanan’ny fitsikerana intsony izao fa fotoana fandraisana andraikitra, izay nohamafisiny tamin’ny teny hoe : « asa fa tsy kabary ». Noho izany, nitsanga-na ny lehilahy, ho anisan’ny hofidiana amin’ny fifidianana hitantana ny ligin’i Atsinanana amin’ny taranja baolina kitra, izay hatao ny 27 Martsa ho avy izao.
Tafiditra amin’ny fandaharan’asany ny fanaovana ny « formation des cadres techni-ques » sy ny mpitarika ny klioba, ary mipaka hatramin’ny mpilalao. Fampitomboina ny fotoana hanaovana ny fifaninanana ho 12 volana ao anatin’ny iray taona. Fanomezan-kasina ny mpilalao, amin’ny alàlan’ny fanomezana ny mari-pankasitrahana isaky ny fifaninanana. Ny fametrahana ny fifaninanana amin’ireo tanora ao anaty sokajin-taona (U15, U17, U20). Ambonin’izany rehetra izany ny fanatsarana ny foto-drafitr’asa momba ny kianja filalaovana, sy ny fiaraha-miasa feno amin’ireo mpitondra mahefa eto an-toerana.
Marihina fa efa nisahana sy nitantana klioba maro teto an-tampon-tanànan’i Tomasina ny tenany, raha tsy hiteny afa-tsy ny klioba izay anisan’ny nitondra avo ny anaran’i Toamasina, dia ny klioban’i M.M.M, tamin’ ny taona 1979-1982, sy ny klioban’i Trans7 ny 1991-1993. Santionany ihany ireo voalaza ireo.